बुद्ध फाउण्डेसनले गर्यो बुद्धजयन्ती कार्यक्रमको समिक्षा
लन्डन । बुद्ध फाउण्डेसन यूकेले गत महिना लण्डनको ट्राफल्गर स्क्वायरमा गरेको बुद्धजयन्ती कार्यक्रमको समिक्षा गरेको छ । आइतबार सल्लाहकारहरु समेतको सहभागितामा प्लमस्टिडमा बसेको कार्यसमिति बैठकले कार्यक्रमको समिक्षा गरेको हो ।
जुन फेस्टिबलमा देखियो बेलायतका नेपाली तन्नेरीहरुको संगीतप्रेम ( फोटोफिचर)
लण्डन । नेपाली संगीतका चर्चित तथा लोकप्रिय हस्तीहरुको प्रस्तुतिमा बेलायतमा आयोजित एक आउट डोर सांगीतिक कार्यक्रम हेर्न हजारौं दर्शक भेला भएका छन् ।
पासा पुचः गुथि साउथ ईस्ट लण्डनमा फेरि सुशील
आइतबार सम्पन्न संस्थाको सातौं अधिवेसनले यसअघिकै अध्यक्ष प्रजापतिकै अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयां कार्यसमिति चयन गरेको छ । १७ सदस्यीय नयां कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्ष रहनेछ ।
टिम प्रिभ्युः कस्तो छ इंङ्ल्याण्डको टिम ? ट्युनिसियालाई पराजित गर्न सक्ला त ?
एजेन्सी । एकपटक विश्वकप जितेको इंल्याण्ड यसपटक पनि विश्वकप जित्ने दाउमा रहेको । सजिलो ग्रुपमा परेको इंल्याण्ड यसपटकको विश्वकपमा सेमिफाइनलसम्म
वेल्स । गैर आवासीय नेपाली संघ ( एनआरएन ) यूकेको वेल्स राज्य परिषद गठन गरिएको छ । आइतबार वेल्सको कार्डिफमा सम्पन्न पहिलो भेलाबाट रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा वेल्स परिषद गठन गरिएको हो ।
लर्डसमा नेपाल टिमको प्रतिक्षा
लन्डन । क्रिकेटप्रेमी बेलायतवासी नेपालीलाई खुशीको खबर छ । नेपाल क्रिकेट टिम दोश्रो पटक विश्वकै प्रतिष्ठित लर्ड्स क्रिकेट मैदानमा उत्रिदैछ ।
सञ्जिवनीको आवाजमा गीतकार उप्रेतीले ल्याए नयां गीत ( भिडियो)
उप्रेतीको रचनामा रहेको 'अंगालोमा बांधीराख' बोलको गीतको म्युजिक भिडियो शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा लोकप्रिय तथा चर्चित भारतीय गायिका सञ्जिवनी र गायक नारायण धितालको आवाज सजिएको छ ।
अफ्रिकी राष्ट्र इजिप्टलाई १ शुन्यले हराउंदै दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वेले पहिलो जित हात पार्यो । निर्धारित ९० मिनेटको खेल सकिनु केहि सेकेण्डअघि मात्रै उरुग्वेका लागि गिमिनेजले गरेको गोल खेलको निर्णयक बन्यो ।